IVista enomtsalane enomtsalane kunye nePhuli lokuQubha kunye nombono wolwandle - I-Airbnb
IVista enomtsalane enomtsalane kunye nePhuli lokuQubha kunye nombono wolwandle
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguJanuš
UJanuš unezimvo eziyi-120 zezinye iindawo.
UJanuš ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-90% yeendwendwe zakutshanje.
IVilla Vista enedama lokuqubha labucala kunye neSeaview yivilla entsha ngokupheleleyo. Ime kumbindi weSiqithi Krk kwilali encinci ebizwa ngokuba yiPoljica. Le Villa inomtsalane iya kukunika yonke into oyifunayo kwiiholide zakho zokuphumla. Inika indawo entle eqhelekileyo, amagumbi amabini okulala kunye negumbi lokuhlambela le-en-suite kunye neeterras ezimbini ezinkulu.
IVilla Vista ikwindawo engaphandle kwelali yasePoljica. Xa ungena endlwini uya kungena kwiholo yokungena enebathrooma emva koko ufikelele kwindawo entle eqhelekileyo enekhitshi, indawo yokutyela kunye nendawo yokuhlala. Ikhitshi ixhotyiswe ngokupheleleyo. Ifumaneka: ifriji, ifriji enzulu, ihood yokupheka, isitovu, i-oveni, umatshini wekofu, itoaster, iblender kunye nesifudumezi samanzi. Itafile yokutyela ilungiselelwe abantu aba-6. Kwindawo yokuhlala i-sofa ekhululekile, enokuthi ilungiselelwe ibhedi eyongezelelweyo, ilinde ukuba uphumle phambi kweTV yesikrini esicaba. Umabonakude uxhotyiswe ngeenkqubo zokuhlala. Ukusuka kwindawo eqhelekileyo, unokufikelela kwindawo ebanzi enetafile ezintandathu.
Izitepsi ziya kukukhokelela kumgangatho wokuqala, apho amagumbi amabini okulala abanzi anamagumbi okuhlambela e-en-suite akulindile. Amagumbi okulala aya kulungiswa ngelinen yokulala kwaye ane-air-conditioning. Kukwakho nendawo ekhuselekileyo. Amagumbi okuhlamba axhotyiswe ngeshawa, isinki, indlu yangasese kunye nesomisi seenwele. Iitawuli ziya kuba sezandleni zakho.
Ngaphandle kukho idama lokuqubha, elingqongwe zizityalo ezinevumba elimnandi zeMeditera, iibhedi zelanga, ishawari yangaphandle, itafile engaphandle enezitulo kunye nebarbecue.Ngasendlwini kukho indawo yokupaka iimoto ezininzi. Ngezantsi kwendlu kukho ukugcinwa kwesandla, apho unokugcina iibhayisekile zakho okanye ezinye izixhobo zemidlalo. Onawo umatshini wokuhlamba, intsimbi kunye nebhodi yentsimbi. I-Wi-Fi ikwafumaneka simahla.
Umbuki zindwendwe ngu- Januš
I-host iyakufumaneka ngokwemfuno.
Iilwimi: Dansk, Nederlands, English, Français, Deutsch, Italiano, Polski
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Malinska